Beesha Shiidle oo taageertay musharaxa xildhibaanimo ee Maxamed Abuukar Zubeyr (Daawo Sawirro) - iftineducation.com
iftineducation.com – Waxaa xaflad si heer sare loo soo agaasimay lagu qabtay magaalada Jowhar ee caasimadda Gobolka Shabeelaha Dhexe taas oo lagu soo dhaweeyay Agaasimaha Guud Wasaaradda Arrimaha Dastuurka Mudane Maxamed Abuukar Zubeyr oo haatan u sharaxan Aqalka Hoose ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya 2016.
Xafladda soo dhaweynta Musharax Xildhibaan Zubeyr waxaa isugu yimid dad aad u farabadan oo isugu jira Odoyaasha dhaqanka oo uu horkacayo Suldaanka Beelaha Lixda Shiidle Suldaan Axmed Rashiid Sheceyb, Siyaasiyin, Dhalinyaro iyo Haween.
Intii ay munaasabadda socotay, waxaa joogta ka hadlay dhammaan Nabaddoonada lixda beel ee Shiidle, Siyaasiyiinta ugu caansan, howmuudka haweenka iyo dhalinyarada kuwaasoo si diiran usoo wada dhaweeyay, ugu farxay, raali uga noqday isla markaana si buuxda u taageeray Musharaxnimada Mudane Zubeyr.
Waxey dhammaan dadka munaasabadda kasoo qeybgalay ay wada qireen in Musharax Xildhibaan Zubeyr uu yahay nin aqoon yahan ah oo karti leh uuna yahay ninka kaliya ee u qalma xilkaan waqtigaan lagu jiro.
Musharax Xildhibaan Zubeyr ayaa lagu soo dhaweeyay Makrafoonka wuxuuna dhammaan uga mahadceliyay sida quraxda badan ay usoo dhaweeyeen uguna muujiyeen garab istaag iyo taageero buuxda oo aan loo kala harin.
Musharax Xildhibaan Zubeyr waxuu soo bandhigay wax qabadkiisa iyo qorshe kaasoo ay dhammaan beesha ula dhacday. Waxuu balanqaaday in uu isbedel weyn oo lataaban karo ka sameyn doono dhinacyo badan haddii ay ahaan laheyd Waxbarashada, dhaqaalaha, horumarka Gobolka gaar ahaan Shabeelaha Dhexe iyo Arrimaha siyaasadda guud ahaan.
Waxaa munaasabadda ka hadlay soona xiray Suldaanka Beelaha Lixda Shiidle Suldaan Axmedrashiid Sheekh Shuceyb oo si aan la qiyaasi karin qiirana ku jirto u amaanay Musharax Xildhibaan Maxamed Abuukar Zubeyr. Wuxuu ku tilmaamay in uu yahay qofka saxda ahaa ee loo baahan yahay lagana maarmi karin waqtigaan lagu jiro.
Suldaanka waxuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay kuma booriyay beesha in ay si aan leexleexad laheyn u doortaan Musharax Xildhibaan Maxamed Abuukar Zubeyr iyagoo kafiirinaya dantooda iyo tan Qaranka.
Agaasime Guud Zubeyr waa nin aqoon yahan ah oo darajada Masterka ku soo qaatay waddanka Malaysia. Waxuu in muddo ah ka shaqeeyay hay’adaha Dowliga iyo aan aan Dowliga aheyn. Waxuu muddo aad u dheer bare ka ahaa Jaamacadda SIMAD. Waxuu kaloo Jaamacadaha SIMAD ka soo noqday Madaxa Xiriirka Guud.
Mudane Zubeyr waxuu door weyn ka cayaaray arrimaha bulshada waxuu ahaa Guddoomiyaha Xiriirka Ururada Shaqaalaha Soomaaliyeed. Waxuu sidoo kale ka soo shaqeeyay Bangiga Horumarinta iyo Dib u Dhiska Soomaaliyeed.
Ka hor inta uusan noqon Agaasimaha ee Wasaaradda Arrimaha Dastuurka, waxuu Agaasimaha Waaxda Qorsheynta iyo Horumarinta ka ahaa Wasaaradda Caddaaladda iyo Arrimaha Dastuurka xilligii uu Wasiirka ka ahaa Xil. Faarax Sheekh Cabdulqaadir.
Ciyaartoyda Qiimaha Faraha Badan Ku Fadhiya Ee Manchester United Oo Tababar Ku Sameeyey Goob Aan La Fileyn (Sawirro)